Fizahantany ao amin'ny Fanambarana Glasgow momba ny fiovan'ny toetr'andro Ireo mpilalao matanjaka vaovao dia mihoatra noho ny UNWTO na WTTC
Home » Lahatsoratra farany farany » News sustainability » Fizahantany ao amin'ny Fanambarana Glasgow momba ny fiovan'ny toetr'andro Ireo mpilalao matanjaka vaovao dia mihoatra noho ny UNWTO na WTTC
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • fampiasam-bola • fivoriana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao Mafana Espaniola • News sustainability • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Raha ny fiaraha-mitantana sy ny fizahantany no tian'i Espaina sy Saodiana vaovao dia mila hetsika fa tsy fanambarana, nosoniavina tamin'ity herinandro ity ny Fanambarana Glasgow momba ny hetsika momba ny toetrandro.
Maherin'ny 300 ny mpandray anjara amin'ny fizahantany no nanao sonia ny Fanambarana Glasgow momba ny hetsika momba ny toetr'andro tamin'ity herinandro ity, izay manaiky ny filana maika ny drafitra mifanaraka amin'ny toetr'andro amin'ny fizahan-tany.
Raha nanantena ny hanodina ity hetsika fiovaovan'ny toetr'andro ity koa ny milina fampielezan-kevitry ny UNWTO ho fitakiana ny WTTC hanohana ny sekretera jeneraly amin'ny dingana fanamafisana ny fifidianana ho avy amin'ny faran'ity volana ity, nanazava ny WTTC fa tsy manohana na iza na iza.
Ny tontolon'ny fizahantany anefa dia miray hina raha ny fiovaovan'ny toetr'andro no resahina. Ny sasany dia mitondra delcaration, ny hafa mifantoka amin'ny hetsika matotra kokoa, fa ny fiovan'ny toetr'andro izao no ifantohan'ny fanavaozana vaovao ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany miaraka sy aorian'ny COVID-19.
Araka ny fanambarana voarain'i eTurboNews avy amin'ny the World Travel and Tourism Council, WTTC, ny Fanambarana Glasgow dia hetsika tarihin'ny fiaraha-mitantana ahitana UNEP, Tourism Declares, Travel Foundation ary tohanan'ny UNFCCC.
Tsy ny UNWTO ihany no mitarika, araka ity fanambarana WTTC ity.
Ny WTTC dia manana fifandraisana matanjaka amin'ny ankamaroan'ny sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana ao anatin'izany ireo voalaza etsy ambony ireo, ankoatra izany, manana fanoloran-tena mafy amin'ny fiovan'ny toetr'andro izahay ary ny mpikambana dia te-haneho ny fitarihana amin'ny alàlan'ny fankatoavana ny fanirian'ny fanambarana amin'ny fotoana tena lehibe.
Mpikambana maro ao amin'ny WTTC toa an'i Accor, Iberostar, ary ny hafa no nanao sonia ny fanambarana, ary noho izany dia zava-dehibe ho an'ny WTTC ny nampiana ny feony hanohanana ny finiavana ho amin'ny aotra net sy ny fanoloran-tena hanohana ny mpikambana ao aminy amin'ny famolavolana drafitrasa momba ny toetr'andro.
Na izany aza, ny fanohanan'ny WTTC navoaka tao amin'ny Fivoriamben'i Glasgow dia tsy nisy ifandraisany velively tamin'ny fifidianana Sekretera Jeneralin'ny UNWTO na ny dingana ara-politika rehetra, satria nadika tamin'ny fanehoan-kevitra sasany hita tamin'ny famoahana media sosialy akaikin'ny UNWTO.
Araka ny fampitam-baovaon'ny media sosialy hita tao amin'ny tranokalan'ny UNWTO, ny Fanambarana Glasgow dia novolavolaina tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasan'ny UNWTO, ny Programan'ny Firenena Mikambana momba ny Tontolo Iainana (UNEP), ny Visit Scotland, ny Travel Foundation, ary ny Tourism Declare a Climate Emergency, ao anatin'ny rafitry ny One Planet Sustainable Tourism Program nanolo-tena hanafaingana ny fanjifana maharitra sy ny fomba famokarana.
The Ny indostrian'ny fizahantany dia maniry ny handray anjara amin'ny vahaolana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro mampidi-doza, hoy ny minisitry ny fizahantany Saodiana, niresaka tamin'ny firaisankina ara-pizahantany vaovao eran-tany tarihin'i Arabia Saodita sy Espaina tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity tany Glasgow.
Na izany aza, ny UNWTO dia tsy tafiditra ao anatin'ity hetsika notarihan'ny mpiara-miombon'antoka matanjaka sy ny governemanta ity. Ny fanomezan-toky tamin'io hetsika io dia hetsika, fa tsy fanapahan-kevitra ihany.
Ankoatra ny Fihaonambe ho an'ny fampiasam-bola (FII) vao haingana natao tany Arabia Saodita, dia nisy ny fifanarahana momba ny Arabia Saodita sy Espaina manambatra hery hamolavola ny fizahantany post-COVID ao anatin'izany ny UNWTO.
November 7, 2021 amin'ny 00: 12
Tena diso ianao ary diso hevitra momba ny hevitra ao amin'ny Fanambarana Glasgow. Miankina amin’ny asa izany. Ny mpanambara dia manolo-tena hampihena 50% ny entona karbônina amin'ny 2030 ary tsy maintsy mamokatra drafitr'asa ao anatin'ny 12 volana aorian'ny sonia, avy eo mitatitra isan-taona ny fivoarany.